Izindaba - Isibonisi Esincane se-Pixel Pitch Indoor LED
Isibonisi esiholele ekuqashweni
Isibonisi esiholwa ngaphakathi
Isibonisi esiholwa ngaphandle
Inkundla kwaholela isibonisi
Isibonisi esiholelekile esigobile
Isibonisi se-LED esincanyana se-Pixel Pitch
1.High-ngokunemba CNC ukucutshungulwa, kulula ukufeza splicing Seamless. Uma isetshenziswa engqungqutheleni yevidiyo ekude, ubuso bomlingiswa ngeke buhlukaniswe. Lapho kukhonjiswa i-WORD, i-EXCEL, i-PPT namanye amafayela, ngeke kube khona ukudideka phakathi kwe-patchwork ne-separators yetafula, okuholele ekufundweni okungalungile kokuqukethwe.
Usayizi weKhabinethi: 600x337.5mm
3. umbala nokukhanya kwesikrini sonke esiholelekile kuyahambisana
Inhlanganisela ye-Modular ingabona ukufundwa kwamaphoyinti ngephuzu Ngemuva kwesikhathi eside sokusetshenziswa, ngeke kube khona ukungahambelani kombala nokukhanya phakathi kwamamojula.
4. ibanga lokuguquguquka lokukhanya likhulu
Isikrini esincane se-pixel pitch hd led screen singakwazi ukulungisa ukugqama kwaso ebangeni elikhudlwana. Akunandaba noma ngabe kusendaweni ekhanyayo noma endaweni emnyama, isibonisi esiholile singakhonjiswa ngokujwayelekile ngokulungisa. Kuhambisana nokukhanya okuphansi nobuchwepheshe obuphezulu obuphuzi, ukucaciswa okuphezulu kungatholakala nasekukhanyeni okuphansi.
5. ububanzi obuguquguqukayo bokushisa kombala bukhulu
Ngokufanayo, i-pixel fine led led screen ingalungisa ukushisa kombala kwesikrini ebangeni elikhudlwana. Kuzinhlelo zokusebenza ezidinga ukunemba kombala okuphezulu, njenge-studio, ukumbumbuluzwa okungokoqobo, ezokwelapha, isimo sezulu nezinye izinkambu kungaqinisekisa ukubuyiselwa okunembile kwezithombe.
6. i-angle yokubuka ebanzi
Ukuboniswa okuholelekile kwe-HD encane ye-pixel pitch kuvamise ukuba ne-angle ebukwayo ebanzi ecishe ibe ngu-180 掳, engahlangabezana nezidingo zamakamelo enkomfa amakhulu kanye namahholo enkomfa okubukwa okude nokubukwa kohlangothi.
7. umehluko omkhulu, ukuvuselelwa okuphezulu
Ukukhanya okuphansi nokumpunga okuphezulu, isilinganiso sokuvuselela okuphezulu okungu-3840 Hz.
Uma kuqhathaniswa ne-DLP yendabuko nokuqagela, ukuboniswa okuholelekile kwe-pixel pitch kuncane futhi konga isikhala. Ngosayizi ofanayo, kulula kakhulu ukuthumela kune-LCD.
9.ukuphila isikhathi eside
Imvamisa inempilo yensizakalo yamahora angama-100,000 +, enganciphisa ngempumelelo izindleko zesondlo.
Isikhathi Iposi: Oct-19-2020
Isibonisi sodonga lwevidiyo oluholele ngaphakathi
Ukuqashwa okuholele ekubonisweni
Inkundla yahola iSiboniso
I-Wechat / Whatsapp: +8615915479822